एक वर्षीय चेलापन पाठ्यक्रम – Word of Truth, Nepal
प्रभुलाई ग्रहणयोग्य पहिरन भाग २
कण्ठ गर्नुपर्ने पदहरू: रोमी १४:२१; १ थेस्सलोनिकी ५:२२; तीतस २:२-५; १४
अघिल्लो पाठमा हामीले पहिरन सम्बन्धी दुईटा सिद्धान्तहरू अध्ययन गर्‍यौं। ख्रीष्टियनको पहिरन भद्र हुनु आवश्यक छ र ख्रीष्टियनको पहिरन लैङ्गिक रूपमा भिन्न हुनुपर्छ। यहाँ हामी अरू पाँचओटा सिद्धान्तहरू अध्ययन गर्नेछौं:
३) ख्रीष्टियनको पहिरन पवित्रता र भक्तिको जीवनसित आवद्ध भएको हुनुपर्दछ, दुष्टताको कुनै पनि रूपसित होइन (१ थेस्सलोनिकी ५:२२; एफेसी ५:११)।
यदि कुनै पहिरन शैली परमेश्वरका नियमविरुद्धको विद्रोहसित, अराजकतासित, यौिनक स्वतन्त्रतासित, ईश्वर-निन्दासित, मूर्तिपूजासित, नैतिक भ्रष्टतासित, वा अन्य कुनै दुष्टतासित आवद्ध छ भने एक ख्रीष्टियनले त्यसलाई पहिरनुहुँदैन। जस्तै, पुरुषले लामो कपाल पाल्ने, स्त्रीले कस्सिएको जीन पायन्ट लगाउने, च्यात्तिएको जीन पायन्ट लगाउने, ह्वार्लाङ्ग तल झारेर लाउने पायन्ट जस्ता पन्क र र्‍याप जगतका फेशनलाई यसले निषेधित गर्दछ। यसले ट्याट्टूलाई पनि निषेधित गर्दछ किनकि त्यो विद्रोह र स्व-अभिव्यक्तिसित र अख्रीष्टिय धर्मसित सम्बन्ध राख्ने कुरा हो।
४) ख्रीष्टियनको पहिरन संसारको भन्दा भिन्न चरित्रको हुनुपर्दछ (रोमी १२:२; २ कोरिन्थी ६:१४-१७; तीतस २:१२-१३; याकूब ४:४; १ यूहन्ना २:१५-१६)।
ख्रीष्टियनको पहिरन शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेखीसित आवद्ध भएको संसारको कुनै कुरासित एकनासे हुनुहुँदैन। स्त्रीको यौनिकतालाई प्रदर्शनी गर्ने अशिष्ट पहिरन र “मलाई हेर त” भन्ने सन्देश बोकेका भड्किला फेशनहरू सांसारिक फेशनका उदाहरणहरू हुन्।
५) ख्रीष्टियनको पहिरनले ऊ प्रभुको निम्ति विशेष जाति हो भन्ने कुरालाई अर्थात् ऊ सबै अधर्मबाट छुटाइएको छ र ऊ असल कामका निम्ति जोशिलो छ भन्ने कुरालाई दर्शाउनुपर्दछ (तीतस २:१४)।
परमेश्वरका जनहरू अलग, विशिष्ट, फरक र समर्पित हुनुपर्दछ। हामी उहाँको छाप बोकेर हिँड्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। स्वर्गीय ज्योतिद्वारा हिँडडुल गर्ने भएका हुनाले हामी मानिसको जमातको बीच अलग्गै छुट्टिनुपर्छ। जब परमेश्वरका जनहरू संसारको सामु बेग्लै हुन छाड्छन् यसको मतलब यो हो कि उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई संसारसित सम्झौता गरिदिएका छन्। हामीले मानिसको भन्दा परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ। समाजलाई भन्दा परमेश्वरलाई खुशी पार्न हाम्रो चिन्ता हुनुपर्दछ। यस दुष्ट संसारमा ख्रीष्टको निन्दा बोक्नदेखि हामी पछि हट्नु हुँदैन। “यसकारण यस व्यभिचारी र पापी पुस्तामा जो म र मेरा वचनहरूसँग लजाउनेछ, मानिसका पुत्र पनि पवित्र दूतहरूका साथमा आफ्‍ना पिताको महिमामा आउँदा त्योसँग लजाउनेछन्” (मर्कूस ८:३८)। यदि हामीले ख्रीष्टलाई इन्कार गर्छौं भने ख्रीष्टले पनि हामीलाई इन्कार गर्नुहुनेछ भनेर पावलले भने (२ तिमोथी २:१२)।
६) ख्रीष्टियनको पहिरनले अरूलाई ठेस खुवाउनु हुँदैन (रोमी १४:२१)।
बाइबलअनुसार म आफ्‍नो दाजुभाइको गोठाला हुँ। अरूमा अभिलाषा उत्पन्न गराउने वा अरूहरूका निम्ति गलत नमुना अघि सार्ने वा अरूलाई अन्य हिसाबमा ठेस खुवाउने कुनै पनि पहिरनदेखि हामी अलग बस्नुपर्छ। विशेष गरी हामी चिरिएका स्कर्ट र चिरिएका पहिरनहरू उल्लेख गर्न चाहन्छौं। पुरुषहरूलाई यौिनक तवरले जिस्काउनु उक्त फेशनको एउटा उद्देश्य रहेको छ। चिरिएको ठाउँ घुँडादेखि मुनि छ भने पनि त्यसको असर ज्यादै यौनिक हुन्छ। एकपटक हामीले बाइबल कलेज पढ्दै गरेका केही जवान पुरुषहरूलाई उनीहरू चिरिएका स्कर्टले यौनिक तवरले परीक्षित हुन्छन् या हुँदैनन् भनेर प्रश्न गर्‍यौं अनि तिनीहरूमध्ये हरेकले उनीहरू परीक्षित हुन्छन् भन्ने कुरालाई स्वीकार गरे। यस कुराबाट ख्रीष्टिय महिलाहरू र जवान स्त्रीहरूलाई यस अभद्र फेशनबाट अलग रहन भयङ्कर ठूलो सन्देश मिल्नुपर्ने हो।
धेरैजना स्त्रीहरू भद्रताको मामिला पुरुषकै समस्या हो भनी सोच्दछन् र पुरुषले आफ्‍नो आँखा नडुलाएको खण्डमा समस्याको अन्त हुनेथ्यो भनी ठान्छन्। वास्तविकता यो हो कि यस मामिलामा पुरुष र स्त्री दुवैको गम्भीर जिम्मेवारी छ।
ख्रीष्टिय पुरुषहरूले आफ्‍ना आँखालाई लगाम लाउनु त पर्छ नै र अय्यूबसितै भन्नुपर्छ, “मैले मेरा आँखाहरूसँग एउटा वाचा बाँधेको छु; तब किन म कुनै कन्यामाथि आँखा गाडूँ?” (अय्यूब ३१:१)।
तर यसको मतलब ख्रीष्टिय स्त्रीहरूले मनखुशी वस्त्र पहिरनुहुन्छ र यसमा उनीहरूको कुनै जिम्मेवारी नै छैन भन्ने होइन। यौिनक अभिलाषाको मामिलामा पुरुषहरू गम्भीर रूपमा परीक्षित हुन्छन् भनी तिनी जान्दछिन् भने र निश्चित किसिमका पहिरन अन्य किसिमका भन्दा बढी समस्याजनक हुन्छन् भनी तिनी जान्दछिन् भने, कुनै पनि भक्ति गर्ने युवती वा महिलाले ठेस खुवाउने सम्भावना ननिम्त्याउनलाई आफूले सकभर गर्न चाहँदिनन् होला र?
जसरी सत्रौं शताब्दीमा रिचार्ड ब्याक्स्टरले लेखे,
“यद्यपि यसको जरा [पुरुषमा भएको] पाप र व्यर्थता हो, तरैपनि तपाईंको पाप चाहिँ यसको अनावश्यक उत्प्रेरक हो; किनभने तपाईंले यो विचार गर्नुपर्छ कि तपाईं रोगी प्राणीहरूका बीच बस्नुहुन्छ! अनि तपाईंले उनीहरूको बाटोमा ठेस खुवाउने कुरा तेर्साउनुहुन्न, र उनीहरूको अभिलाषाको आगो सल्काउनुहुन्न, र आफ्‍नो श्रृङ्गारलाई उनीहरूको पासो बनाउनुहुन्न; तर तपाईं पापी मानिसहरूका बीच हिँड्नुपर्छ, मानौं पराल वा बारुदकाबीच एउटा टुकी बोकेजस्तै; नत्र ता तपाईंले पहिला नदेखेको ज्वाला पछि देख्नुहोला जतिबेला त्यसलाई निभाउन गाह्रो पर्ला” (Richard Baxter, 1615-91)।
दाऊद परमेश्वरकै हृदयअनुसारका मानिस थिए, इस्राएलका मधुर सङ्गीतकार थिए जसले आफ्‍ना आँखाका सामु कुनै पनि दुष्ट कुरा नराख्‍ने अठोट गरेका थिए। तरैपनि एकजना स्त्रीलाई तिनको घरको कौसीमाथि नुहाइरेहकी देखेपछि त्यहाँ के भयो भन्ने कुरालाई ख्याल राख्‍नुहोस्। तिनी किन देखिन सक्ने ठाउँमा नुहाइरहेकी थिइन्?
यौन र शारीरिक अभिलाषा जगाउने कुराको सवालमा पुरुषका आँखाले देखेको कुरा उसको निम्ति कति प्रभावशाली हुन्छ भन्ने कुरा धेरैजसो स्त्रीहरूले बुझेका छैनन्:
एकजनाले आफ्‍नो लेखमा यसरी भन्छन्:
“मेरो विश्वासमा धेरैजसो स्त्रीहरूले पुरुषहरूले कसरी विचार गर्दछन् भन्ने कुरा जानेकै छैनन्। मलाई यो विश्वास छ कि त्यहाँ त्यस्ता स्त्रीहरूको वर्ग वा समूह नै छ जसले उनीहरूले यदि पुरुषहरूलाई साँच्ची नै बुझेका भए आफ्‍नो पहिरनको चलनलाई बदल्नेथिए किनकि उनीहरू साँच्ची नै परमेश्वरलाई खुशी पार्न चाहन्छन्। …कुरा यो हो कि, उनीहरूलाई जबर्जस्ती अनाकर्षक रूपमा ढाल्न खोज्ने “यो गर र त्यो नगर” भन्ने कुराहरूको कुनै सूचीको मामिला यो होइन, बरु उनीहरूलाई अभिलाषा नगर्न सहायता गरोस्, र ठेस खुवाउने ढुङ्गा नबनोस् भनी उनीहरूको सहकार्य खोज्ने परमेश्वरको डर मान्ने पुरुषहरूको इच्छाको हो, िकनकि उनीहरू परमेश्वरलाई खुशी पार्न चाहन्छन्।”
अर्को पुरुषले लेखे,
“भद्रताको बाइबलीय मामिला अर्कालाई ठग्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई बुझेर सबभन्दा राम्ररी बुझिन्छ। कसैले पनि त्यस्तो काम गर्नुहुँदैन जसद्वारा उसले अर्कोमा त्यस्ता इच्छाहरू जगाउँदछ जसलाई नैतिकतापूर्वक पूरा गर्न सकिन्न। … हाम्रो समाजले सञ्चार माध्यमको हरेक पक्षलाई प्रत्यक्ष यौनिक विज्ञापनमा डुबाएको कुरा यस पुरुषका लागि धेरै परीक्षा, शोक र चिन्ताको श्रोत बनेको छ। यस्तै खालको मामिला एउटा मण्डलीमा ख्रीष्टिय दिदीबहिनीहरूसित सामना गर्नु पर्ने कुरा सबभन्दा गम्भीर छ। मेरो विश्वासमा ख्रीष्टिय महिलाको वस्त्रको आदर्श व्याख्या भनेको ‘लामो, खुकुलो र प्रशस्त’ (long, loose and lots of it) भन्ने हुनुपर्दछ।
७) वयस्क ख्रीष्टियनहरू जवानहरूका लागि नमुना हुनुपर्दछ (तीतस २:२-५)।
वयस्क महिलाहरूले त्यस्ता पहिरन शैली अपनाएर पनि पुरुषहरूलाई अभिलाषा गर्न प्रेरित नगर्ला, तर उनीहरू केटीहरू र युवतीहरूका लागि नमुना हुनुपर्दछ।
निष्कर्षमा हृदयको महत्त्वको सम्बन्धमा हामी ब्रूस ल्याकीको निम्न भनाइलाई उद्दरण गर्दछौं।
पहिरन हृदयको मामिला हो। कसैलाई उसले कस्तो किसिमको वस्त्र लाउनुपर्छ भनेर पहिरनको सम्बन्धमा सुधार्न सकिएला र पनि उसलाई भेट्नु भन्दा अघि ऊ जति हराएको अवस्थामा थियो उत्तिकै हराएकै अवस्थामा रहन सक्छ। कसैसित पहिरन वा अन्य कुनै कुराको बारेमा कुरा गर्नु अघि म सर्वप्रथम हृदयको बारेमा जान्न चाहन्छु। के तपाईंले मुक्ति पाउनुभएको छ? प्रेरित १५:९। के तपाईंको हृदय विश्वासद्वारा शुद्ध पारियो? रोमी १०:९। परमेश्वरले ख्रीष्टलाई मरेकाबाट बौराउनुभयो भनेर के तपाईंले आफ्‍नो हृदयमा विश्वास गर्नुभयो? मैले जान्न चाहेको पहिलो कुरा चाहिँ तपाईंको हृदय र मुक्तिको बारेमा हो। यदि तपाईंले मुक्ति पाउनुभएको छैन भने तपाईंले आफ्‍नो पहिरनलाई कुनै तरिकाले बदलनु होला तर त्यसले तपाईंको आत्मालाई मदत गर्नेछैन। तपाईं पहिले ख्रीष्टकहाँ आउनैपर्छ।
तपाईंले मुक्ति पाउनुभएको छ भने, अझै पनि मामिला हृदयकै हो। यदि म कुनै ख्रीष्टियनसित यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्‍यो भने म सबभन्दा पहिला हृदयकै विषयमा कुरा गर्नेछु। के तपाईंको हृदय परमेश्वरसित ठीक छ? यदि तपाईंको हृदय परमेश्वरसित ठीक छैन भने प्रत्येक तर्क सुन्दा तपाईंलाई रिस उठ्नेछ र यस विषयलाई छलफलमा ल्याउने जोसुकैसित पनि चिढिनुहुनेछ।
बाइबलले हृदयको कुरा गर्दछ। हिब्रू १०:२२, “आओ, साँचो मनले, विश्वासको पूरा निश्चयतामा, दुष्ट विवेकबाट शुद्ध हुनालाई आफ्‍ना हृदयहरूमा छिट्काउ लिएर र आफ्‍ना शरीरहरूलाई शुद्ध जलले धोएर हामी नजिकमा जाऔं।”
परमेश्वरले यहाँ ख्रीष्टियनहरूसित कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि २४ र २५ पदहरूमा, “अनि आओ, प्रेम र असल कामहरूका निम्ति हौसला दिनालाई एकअर्काको चिन्ता गरौं; कसै-कसैको आदत भएझैं हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौं; तर एक-अर्कालाई उत्साह दिँदै रहौं; अनि त्यो दिन जति नजिक-नजिक आउँदै गरेको तिमीहरू देख्छौ, उति नै बेसी हामी यसो गर्ने गरौं।”
उचित पहिरन हृदयको मामिला हो (Bruce Lackey, “Bible Guidelines for Clothing”)।
अङ्ग्रेजीमा Dressing for the Lord शीर्षक गरेको पुस्तकले यस विषयलाई धेरै विस्तृत रूपमा चर्चा गरेको छ। उक्त पुस्तक Way of Life Literature बाट उपलब्ध हुन सक्छ।
प्रभुमा ग्रहणयोग्य पहिरन भाग २ सम्बन्धी पुनरावलोकन प्रश्नहरू
विश्वासीहरूलाई ट्याट्टू हान्न निषेध गर्ने बाइबलको कुनचाहिँ एउटा सिद्धान्त छ?
“मलाई हेर” भन्ने आवाज निकाल्ने भड्किला फेशनका केही उदाहरण के-के हुन्?
“प्रभुको निम्ति विशेष जाति” हुनु भनेको के हो?
विश्वासी किन मानिसहरूको जमातका बीच छुट्टै देखिनुपर्छ?
“यस व्यभिचारी र पापी पुस्तामा जो म र मेरा वचनहरूसँग लजाउनेछ, मानिसका पुत्र पनि… त्योसँग लजाउनेछन्” भनेर येशूले चेताउनी दिनुभएको पद कुनचाहिँ हो?
हामीले ख्रीष्टलाई इन्कार गर्‍यौं भने उहाँले पनि हामीलाई इन्कार गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा पावलले कुन पदमा भने?
चिरिएको वस्त्रको उद्देश्य के हो?
अय्यूबले भने, “मैले मेरा आँखाहरूसँग एउटा _______________ बाँधेको छु…”
भद्र वस्त्र पहिरनु कसरी स्त्रीको कर्तव्य हो?
के दाऊद पापमा फस्नुमा बाथशेबाको कुनै हात थियो?
पुरुषका ___________ले _____________ ______________ उसको निम्ति कति प्रभावशाली हुन्छ भन्ने कुरा धेरैजसो स्त्रीहरूले बुझेका छैनन्।
भद्रताको बाइबलीय मामिला, अर्कालाई _____________________ भन्ने सिद्धान्तलाई बुझेर नै सबभन्दा राम्ररी बुझिन्छ।
वयस्क महिलाहरू यौिनक तवरले अभिलाषापूर्ण छैनन् भने तापनि किन उनीहरूले भद्र वस्त्र पहिरनु आवश्यक छ?
पहिरन ___________________को मामिला हो।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 12:32:272020-11-27 13:00:11प्रभुलाई ग्रहणयोग्य पहिरन भाग २
पहिरन ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो किनभने पहिलो, यसले हृदयलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, साथै त्यसलाई असर पार्दछ। दोस्रो, पहिरन महत्त्वपूर्ण कुरा हो किनभने पहिरन एउटा भाषा हो। यो एउटा “सामाजिक भाषा” हो, फेशनको अभिव्यक्ति हो। यस कुराकै ज्ञानको आधारमा फेशन उद्योग फस्टाइरहेको छ र परमेश्वरका छोराछोरीले पनि यसलाई बुझ्नु आवश्यक छ। मैले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने कुरा हो, मेरो पहिरनले कस्तो सन्देश प्रसारण गर्दैछ? विकिपिडियाले फेशनलाई “चलनचल्तीको अभिव्यक्तिको एक किसिम” (a prevailing mode of expression) भनेर परिभाषित गरेको छ। “पहिरनको हरेक अंशले कुनै सांस्कृतिक र सामाजिक अर्थ बोकेको हुन्छ” भनेर विकिपिडियाले मानिलिएको छ र “प्रसारण भइरहेको सन्देश बुझ्न सक्नलाई मान्छेले उक्त भाषा जानेको हुनुपर्छ” भनेर टिप्पणी गरेको छ।
खुकुलो यौनिक विशिष्टता बोकेका “तीष्ण” खाले पहिरन बिक्री गर्ने एबरक्रोम्बी र फीच (Abercrombie & Fitch) नाम गरेको पहिरन उद्योग त्यसको “विद्रोही मनोभावका निम्ति प्रख्यात” छ भनेर “चप्पल, च्यात्तिएका जीन र नियन्त्रण” शीर्षक गरेको लेखमा भनिएको छ (“Flip-Flops, Torn Jeans, and Control”, Business Week, May 30, 2005)। त्यसैले संसारले समेत Abercrombie & Fitch को पहिरनको सन्देश कस्तो खालको छ भन्ने कुरा बुझ्दछ। तिनीहरू लुगा मात्र होइन एउटा मनोभाव बिक्री गर्दैछन्।
भद्रतालाई नयाँ नियममा “पतिव्रता”, “आत्मसंयमी”, “सचेत”, र “लज्जालु स्वभाव” भन्ने शब्दहरूले बयान गरिएको छ। स्त्रीलाई अश्लील वा अशोभनीय तरिकाले प्रदर्शन गराउने कुनै पनि कुरालाई यसले निषेध गर्दछ।
तेस्रो, भद्र पोशाक भड्किलो हुँदैन। प्रेरित पावलले १ तिमोथी २:९ मा भद्र पहिरनको कुरा गर्दा उनले “बाटिएको केश, वा सुन, वा मोतीहरू, वा दामी-दामी वस्त्र” लाई उल्लेख गर्दछन्। यस संसारको भक्तिहीन फेशन उद्योगको लक्ष्य भनेको अहङ्कारी, भड्किलो, सांसारिक बुद्धिको हाउभाउ र साथै यौन-केन्द्रित हाउभाउ सृजना गर्नु हो। भक्ति गर्ने स्त्रीले यस्ता फेशनलाई रद्द गर्दछिन् र आफैलाई र आफ्‍ना छोरीहरूलाई “सुहाउने [भद्र] वस्त्र” पहिराउँदछिन्।
केशका शैलीहरू पनि अभिव्यक्तिहरू हुन्। पुरुषले लामो केश पाल्ने र स्त्रीले छोटो केश पाल्ने कुरा केवल निर्दोष फेशन होइनन् तर परमेश्वरको सृष्टिको नियमका विपरित उठेका विद्रोहका अभिव्यक्ति हुन् (१ कोरिन्थी ११:१४-१५)। १९६० को दशकको एउटा रक गीतले जवान पुरुषहरूलाई आफ्‍नो केश लामो हुन दिन र “तिम्रो अनौठो झण्डा फरफराउनदेऊ” भन्दै प्रोत्साहन दिन्थ्यो। भ्यान हालेनको डेविड ली रोथको गवाही थियो: “[मेरो लामो कपाल] एउटा झण्डा हो। यो तार्जन हो। म सधैं व्यवस्थापनको विरोधी रहनेछु” (John Makujina, Measuring the Music, p.73)।
उत्तर: मोशाको व्यवस्था ख्रीष्टियनको व्यवस्था होइन भनेर हामी जान्दछौं तरैपनि तिनमा ख्रीष्टिय जीवनका निम्ति पाठहरू छन्। १ कोरिन्थी १० मा पावलले व्यवस्थाबाट थुप्रै कुरा उल्लेख गर्छन् र निष्कर्षमा भन्दछन्, “अब उदाहरणका निम्ति यी सबै कुराहरू तिनीहरूमाथि आइपरे, र हाम्रै चेताउनीका निम्ति लेखिएका हुन्, जसमाथि संसारका अन्तहरू आइपुगेका छन्” (१ कोरिन्थी १०:११)। व्यवस्था २२:५ मा हाम्रै चेताउनीका निम्ति लेखिएको एउटा नैतिक सिद्धान्त छ। त्यहाँ उल्लेखित सिद्धान्त यो हो कि पुरुष र स्त्रीका पहिरनका बीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्दछ।
पावलले यस कुरालाई १ कोरिन्थी १४:३४ मा जोड दिए जब उनले भने, “तिमीहरूका स्त्रीहरू मण्डलीहरूमा चुप लागून्; किनकि उनीहरूलाई बोल्ने अनुमति छैन, तर आज्ञाकारी भएर रहने आज्ञा छ; व्यवस्थाले पनि यसै भन्छ।” तसर्थ, पावलको अनुसार, पुरुष र स्त्री बीचका सृष्टिदेखिकै भिन्नताका बारेमा मोशाको व्यवस्थाले ख्रीष्टिय जीवनको सवालमा प्रत्यक्ष तवरले सम्बोधन गर्दछ।
उत्तर: यद्यपि हामीले भौतिक रूपमा यी आज्ञालाई आज पालन गर्दैनौं, तिनीहरूले सिकाएका अपरिवर्तनीय आत्मिक सिद्धान्तहरूलाई भने हामीले पालन गर्नैपर्छ। यी आज्ञाहरू दिनुभएर परमेश्वरले इस्राएललाई अलगपनताको सिद्धान्त सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यस्ता नियमहरू उनीहरूले “पवित्र र अपवित्र, शुद्ध र अशुद्धको बीचमा भिन्नता राख्न” सकून् (लेवी १०:१०) भन्ने उद्देश्यले उनीहरूलाई दिइएका थिए। व्यवस्था २२:९-११ ले, तब, नयाँ नियमको ख्रीष्टियनलाई प्रभुको दृष्टिमा जुनसुकै पनि खराब र गलत कुरादेखि ऊ अलग हुनुपर्छ भन्ने कुराको सम्झना गराउँदछ (मत्ती ६:२४; २ कोरिन्थी ६:१४-१७; १ यूहन्ना २:१५-१६, आदि)।
जेनेभा बाइबल (१५६०) को फूटनोटमा भनिएको छ: “पुरुषको वस्त्र स्त्रीले नपहिरोस्, न ता स्त्रीको वस्त्र पुरुषले; किनभने यस्तो गर्नेहरू सबै परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरका निम्ति घृणित छन्। किनभने त्यसो गर्दा प्रकृतिको नियमलाई अदलबदल गरिन्छ र यसरी तिमीले परमेश्वरलाई तिरस्कार गर्दा रहेछौ भन्ने कुरा प्रकट हुन्छ।”
म्याथ्यू पूल (१६२४-१६७९) ले भने: “यसो गर्नु निषेधित छ, एकातिर शिष्टताको खातिर, कि मानिसहरूले ती लिङ्गहरूलाई नअलमल्याऊन्, न ता अलमल्याएको जस्तो होस्, जसलाई परमेश्वरले भिन्न बनाउनुभएको छ, ताकि दुष्टताको सबै रूपबाट टाढा बस्न सकियोस्, अर्थात् पहिरनको त्यस किसिमको सट्टापट्टाको पछाडि हुने पुरुषमा स्त्रीको जस्तो नरम-स्वभावको सङ्केत, स्त्रीमा अहङ्कारको, दुवैमा हलुकोपनको र बचपनको; र अर्कातिर दुष्टताका सबै शङ्का र अवसरहरूलाई पर राख्नलाई पनि हो जो नत्र ता खुलेआम निम्त्याइनेथ्यो।”
जन गिल (१६९७-१७७१) ले भने: “पुरुषको वस्त्र स्त्रीले नपहिरोस्…त्यो त ज्यादै अशोभनीय र अरूलाई ठेस खुवाउने कुरा हो र आफ्‍नो लिङ्गको भद्रतालाई नसुहाउने कुरा हो। …न ता स्त्रीको वस्त्र पुरुषले पहिरोस्; यसले त पुरुषमा उसलाई नसुहाउने नरम स्वभाव ल्याउँछ… प्रकृतिमा लिङ्गहरूमा भिन्नता राखिएको हुनाले यो कुरा वस्त्रको भिन्नताले जनाइनु उचित र आवश्यक छ नत्र भने थुप्रै दुष्टताहरू आउन सक्छन्; अनि यो नियम प्रकृतिको नियम र प्रकाशसित मेल खान्छ…”
आल्बर्ट बार्न्स् (१७८९-१८७०) ले लेखे: “लिङ्गहरू बीचको भिन्नता स्वाभाविक कुरा हो र परमेश्वरबाट स्थापना गरिएको कुरा हो र अशिष्टता ननिम्त्याईकन र फलस्वरूप शुद्धतालाई जोखिममा नपारीकन यसलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न (तुलना गर्नुहोस् १ कोरिन्थी ११:३-१५)।”
जेमीसन, फसेट, ब्राउन (१८६४) ले भने: “यो निषेधाज्ञा उचित थियो; किनभने एउटा लिङ्गका पहिरनलाई अर्कोले अपनाउनु भनेको शिष्टतालाई बिथोल्नु हो, र प्रकृतिमा विद्यमान रहेको भिन्नतालाई निमिट्यान्न पार्नु हो जसले पुरुषमा नरम स्वभावको र स्त्रीमा अभिमान र उत्ताउलोपनको, र साथै दुवैमा ठट्टा र कपटको चरित्रलाई विकास गर्दछ; अनि सारांशमा यसले यति धेरै दुष्टताका लागि ढोका खोलिदिन्छ कि विपरित लिङ्गको वस्त्र लगाउने जोसुकै पनि “परमप्रभुका निम्ति घृणित” भनेर घोषित हुनेछ।
“मानिसहरू पुरानो नियमका पदहरूको सवालमा ‘मन-लागेको‍-मात्र-छान्ने’ खेल खेलिरहेका छन्। उनीहरू भजनसङ्ग्रह २३ लिन चाहन्छन्, भजनसङ्ग्रह १०० पनि लिन चाहन्छन् र साथै पुरानो नियमका त्यस्ता सबै पदहरू पनि जसमा तिनीहरूलाई उनीहरूको जीवनशैलीलाई चुनौती दिने कुरा हुँदैन, तर उनीहरूको जीवनशैलीलाई असर पार्ने कुनै पनि पुरानो नियमको पद छ भने त्यसलाई उनीहरू व्याख्या गरेर उडाउन खोज्छन्। तर, २ तिमोथी ३:१६ ले भन्छ, “सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिइएको हो र शिक्षाका निम्ति, भूलदोष देखाउनका निम्ति, सुधारका निम्ति र धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमका निम्ति लाभदायक छ” (http://www.momof9splace.com/modesty.html)।
“मलाई लाग्छ यसले लैङ्गिक भिन्नतालाई तोड्छ, अनैतिकता ल्याउँछ र समलिङ्गतालाई ‍प्रोत्साहन दिन्छ। पायन्टले स्त्रीलाई पुरुषजस्तो व्यवहार गर्ने बनाउँछ। उनीहरूका पायन्टले आजका स्त्रीहरूलाई एउटी भद्र महिला भएर बस्न वा व्यवहार गर्न नै नजान्ने बनाएको छ। अनि भद्र पोशाक लाउँदा पनि तिनीहरू अब घुँडा दोबार्दैनन् तर छाती खुला देखिने गरी कम्मर दोबार्छन्। तिनीहरू घुँडालाई जोडेर पाउहरू क्रस गरेर बस्दैनन्।”
“के हामी हाम्रा बाजेबज्यैहरूको पुस्ताभन्दा आत्मिक छौं त? छैनौं नै! पायन्ट र स्वीमसूट र मिनी-स्कर्ट लगाउने स्त्रीहरू देखेर उनीहरू स्तब्ध हुन्थे। आज ती कुराहरू विश्वासीहरू र मण्डलीहरूमा समेत सामान्य रूपमा स्वीकार गरिन्छन्।”
“म ६८ वर्ष पुगेको छु र एउटी असल र भद्र स्त्रीसित मेरो विवाह भएको ४९ वर्ष भयो। मण्डलीमा समेत कति स्त्रीहरूको पहिरन देखेर म स्तब्ध हुन्छु। मेरी आमा ८८ वर्ष पुगीन् अनि उहाँ मेरा बाबुसित कपास खेतीमा सँगसँगै काम गर्नुभएको थियो जुन बेला काम सब हातैले गर्नुपर्थ्यो। तर मैले मेरी आमा वा मेरी दुईटै बज्यैहरूलाई कहिल्यै पायन्ट लगाएको देखिनँ यद्यपि उहाँहरू सबैजना खेतमा काम गर्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँहरू मेरा निम्ति कत्ति राम्रो नमुना बनिदिनुभयो। अनि अर्को कुरा, उहाँहरूले आफ्‍ना लुगाहरू सब हातैले धुनुहुन्थ्यो र मैले कहिल्यै पनि कुनै पनि स्त्रीका भित्री पहिरनहरू सबैले देख्ने गरी डोरीमा झुण्ड्याएर सुकाएको कहिल्यै देखिनँ। यसले यो प्रमाणित गर्दछ उनीहरूको भद्रता उनीहरूले आफ्‍नो जीउमा लगाएको कुरामा मात्र सीमित थिएन। त्यो त उनीहरूको हृदयमै थियो।”
दोस्रो जवाफ यो हो, विश्वासीको केशको लम्बाइ अरूलाई ठेस नलाग्ने लम्बाइको हुनुपर्छ (रोमी १४:१९,२१)। म नयाँ ख्रीष्टियन हुँदा मैले आफ्‍नो केशलाई पहिलाको भन्दा निकै छोटो हुने गरी काटेँ। तर एक साँझ म सुसमाचार सुनाउन निस्कँदा एकजना वृद्ध महिलाले मेरो केश एउटा “परमेश्वरको भक्तजन” लाई नसुहाउने गरी बढी लामो भएको भन्दै गुनासो गरिन्। म चिढिनुको सट्टा र आफ्‍नो “अधिकार” को निम्ति अडान लिनुको सट्टा मैले आफूलाई नम्र पारेँ र भोलिपल्ट नै त्यसलाई काटेँ। पुरुष र स्त्रीहरू दुवै नै यस सिद्धान्तप्रति संवेदनशील हुनु आवश्यक छ। बाइबल विश्वास गर्ने आजका धेरै मण्डलीहरूमा ज्यादै छोटो केश भएका स्त्रीहरू हुन्छन्। कतिपय जवान स्त्रीहरू पनि यस्ता देखिन्छन् तर वृद्ध स्त्रीहरूमा भने यो त रीति नै बसेको जस्तो देखिन्छ। यस कुरालाई नरूचाउने परमेश्वरका थुप्रै भक्तजन र भक्त गर्ने स्त्रीहरू म चिन्दछु र म यो गलत हो भन्ने विश्वास गर्दछु र यी दिदीबहिनीहरूले यस चेताउनीलाई लिएर यस प्रकारले ठेस खुवाउन छोड्नुपर्छ। बाइबलको दृष्टिकोणमा “सुविधाजनक”, “फेशन”, र “मेरो अधिकार” को कुरा गर्नुभन्दा ठेस नखुवाउनु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
एबरक्रोम्बी र फीचले एक “_____________ _______________” को बिक्री गर्दछ।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 12:29:002020-11-27 12:27:13प्रभुमा ग्रहणयोग्य पहिरन भाग १
नयाँ नियमको विश्वासीलाई विश्राम दिन पालन गर्नुपर्ने कुनै वाध्यता छैन (कलस्सी २:१६)। पावलले यहाँ बहुवचन प्रयोग गर्दै “विश्राम दिनहरू” को कुरा गर्दा उनले परमेश्वरले इस्राएललाई दिनुभएका सबै विश्राम दिनहरूलाई जनाउँदैछन् जसमा चाडहरूसित सम्बन्धित विश्राम दिनहरू पनि पर्दछन्। जस्तै, पेन्टेकोस्ट हप्ताको सधैं पहिलो दिनमा पर्थ्यो तर त्यो एक विशेष विश्राम दिन थियो जसमा कुनै काम गरिँदैनथ्यो (लेवी २३:१६-२१)। सेभेन्थ‍-डे एड्भेन्टिस्टहरू लगायत विश्राम दिन पालन गर्ने अरूहरू कलस्सी २:१६ ले नियमित साप्ताहिक विश्राम दिनलाई जनाउँदैन भन्ने दाबी गर्दछन्, तर त्यस कुराको कुनै प्रमाण छैन।
“विश्राम दिन पुरानो सृष्टिसित सम्बन्धित कुरा हो र त्यो तोकिएर इस्राएललाई नै दिइएको थियो; प्रभुको दिन नयाँ सृष्टिसित सम्बन्धित कुरा हो र यो विशेष गरी मण्डलीको हो। विश्राम दिनले व्यवस्थालाई औंल्याउँदछ जसरी ६ दिनका कामपछि विश्राम हुन्छ, तर प्रभुको दिनले अनुग्रहलाई औंल्याउँदछ, किनकि हामी हरेक नयाँ हप्ता विश्रामबाट शुरु गर्दछौं जसका पछि काम हुन्छन्” (Wiersbie’s Old Testament Outlines)।
बर्नबासको पत्र (१०० एडी ताका) — “जसको कारण हामी आनन्दसित आठौं दिनलाई पालन गर्दछौं, जुन दिन येशू मरेकाहरूबाट बौरेर उठ्नुभयो।”
इग्नेसियसको पत्र (१०७ एडी ताका) — “पराई शिक्षाहरूद्वारा बहकाउमा नपर, नता दन्त्यकथाहरूद्वारा, जो लाभदायक हुँदैनन्। किनकि हामी अझै यहूदी व्यवस्थाअनुसार जिउनु भनेको हामीले अनुग्रह प्राप्त गरेका छैनौं भन्ने कुराको स्वीकार गर्नु हो…यसकारण यदि उक्त प्राचीन व्यवस्थाअनुसार हुर्काइएकाहरूले एउटा नयाँ आशालाई प्राप्‍त गरेका छन् भने विश्राम दिन पालन गर्न छाडेका हुन्छन् र प्रभुको दिनलाई पालन गर्दै आएका हुन्छन्, जुन दिन उहाँद्वारा र उहाँको मृत्युद्वारा हामीले नयाँ जीवन पाएका छौं।”
जस्टिन मार्टर (१४० एडी ताका) — “आइतवार भनिने दिनमा शहर वा गाउँबस्तीमा बसोबास गर्नेहरू सबै एकै ठाउँमा भेला हुने गर्दछन् अनि त्यहाँ प्रेरितहरूका पत्रहरू वा अगमवक्ताहरूका लेखोटहरूबाट पढिन्छ। …तर हामी सबैजनाले साझा सभा राख्ने दिनचाहिँ आइतवार हो किनभने परमेश्वरले पहिलो दिनमा नै …संसार बनाउनुभयो; अनि येशू ख्रीष्ट हाम्रा मुक्तिदाता त्यही दिनमा मृत्युबाट बौरेर उठ्नुभयो।”
बार्देसानेस्, एडेस्सा (१८० एडी ताका) — “हप्ताको पहिलो दिनमा हामी एकआपसमा मिलेर भेला हुन्छौं।”
अलेक्जान्ड्रियाको क्लेमेन्ट (१९४ एडी) — “तिनले नियमबमोजिम, सुसमाचार अनुसार, प्रभुको दिनलाई पालन गर्दछन्…आफैमा प्रभुको बौरिउठाइलाई महिमा दिन्छन्।”
टर्टुलियन (२०० एडी) — “यस दिनलाई आफ्‍नो विश्राम दिन भनेर संज्ञा दिनेहरूको खण्डन गर्दै हामी शनिवारपछिको दिनलाई औपचारिकता दिन्छौं।”
इरेनियस (१५५-२०२ एडी ताका) — “प्रभुको बौरिउठाइको रहस्यलाई प्रभुको दिनमा बाहेक अन्य दिनमा मनाउन मिल्दैन अनि यस दिनमा मात्र हामीले प्रभु भोजको रोटी भचाइँको पालना गर्दछौं।”
साइप्रियन (एडी २५०) — “आठौं दिन अर्थात् शनिवारपछिको पहिलो दिन, र प्रभुको दिन।”
आनाटोलियस (एडी २७०) — “प्रभुको दिनमा भएको प्रभुको बौरिउठाइप्रतिको हाम्रो श्रद्वाभावले त्यसलाई मनाउन हामीलाई प्रोत्साहन गर्दछ।”
पिटर, अलेक्जान्ड्रियाको बिशप (एडी ३०६) — “तर प्रभुको दिन हामी रमाहटको दिनको रूपमा मान्दछौं किनभने उक्त दिनमा उहाँ फेरि बौरनुभयो।”
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 12:11:012020-11-27 12:19:29विश्राम दिन के हो?
उत्पत्तिका शुरुका ११ अध्यायहरू ऐतिहासिक वृत्तान्त शैलीमा लेखिएका छन्, पद्य शैलीमा होइन। “तिनमा ६४ ओटा भौगोलिक शब्दावली, ८८ ओटा व्यक्तिगत नामहरू, ४८ ओटा प्रजातीय नामहरू र कमसेकम २१ ओटा परिचित सांस्कृतिक सामग्रीहरू (जस्तै सुन, गोकलधूप र गोमेद पत्थर, पित्तल, फलाम, गोपेर काठ, अलकत्रा, मसला, ईँटा, ढुङ्गा, वीणा, बाँसुरी, शहरहरू, धरहराहरू) उल्लेख छन् । यस सूचीको विशेष महत्त्व त्यसबेला छर्लङ्ग हुन्छ जब यसलाई अन्यसित तुलना गरिन्छ जस्तै ‘कुरानका न्यून अन्योन्य सन्दर्भहरूसित। उत्पत्तिको दसौं अध्यायमा मात्र महत्त्वपूर्ण गनिने भौगोलिक तथ्याङ्क सम्पूर्ण कुरानमा भन्दा पाँच गुणा बढी भेटिन्छ।’ यीमध्ये एक‍-एक उल्लेखले लेखकको विश्वसनीयतालाई स्थापित गर्ने सम्भावना प्रदान गर्दछ। यहाँ उल्लेखित विषयवस्तुले प्रत्यक्ष रूपमा वास्तविक संसारको वर्णन गरिरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ न कि कुनै अन्य संसार वा वास्तविकताको अन्य तहका घटनाहरूको” (Walter Kaiser, Jr., “The Literary Form of Genesis 1-11”, New Perspectives on the Old Testament, ed. by J. Barton Payne, 1970, p.59)।
सबै जीवहरू आफ्‍नो-आफ्‍नो जातिअनुसार उत्पन्न गर्न सक्ने गरी बनाइएका थिए भन्ने कुरा उत्पत्तिले बताउँछ। “आफ्‍नो-आफ्‍नो जातिअनुसार” भन्ने वाक्यांश उत्पत्ति १ मा ९ पटक भेटिन्छ (उत्पत्ति १:११,१२,२१,२४,२५)। संसारमा हामीले अवलोकन गर्न सक्ने कुरा पनि ठ्याक्कै यही हो। कुकुरले कुकुर उत्पन्न गराउँछ, माकुराले माकुरा, चराले चरा, बदामले बदाम। आफ्‍नै जातिभित्र पशुहरू अन्तरप्रजनन गरी “विकास” हुन सक्छन् (जस्तै, विभिन्न प्रकारका कुकुरलाई प्रजनन गराई फरक खालका कुकुर उत्पन्न गराउन सकिन्छ), तर कुकुरलाई बिरालोसित अन्तरप्रजनन गराउन सकिन्न। यही कुरा हो बाइबलले बताएको अनि प्रकृतिमा जहाँतहिँ हामीले अवलोकन गर्न सक्ने कुरा पनि यही हो, तर क्रम-विकासवादले सबै जीवहरूले सधैं आफ्‍नो-आफ्‍नो जातिअनुसार उत्पन्न गर्दछन् भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्दछ। क्रम-विकासले त माछा उभयचरमा विकास भए र उभयचर सरिश्रृपमा विकास भए र सरिश्रृप पक्षीमा विकास भए, आदि सिकाउँछ।
संसार सिद्ध रूपमा सृष्टि गरिएको थियो अनि पापले गर्दा पतन भयो र त्यसबेलादेखि यो बिग्रँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा उत्पत्तिले बताउँछ। यो कुरा हामीले अवलोकन गर्न सकिने सबै कुरासित मेल खान्छ। सबै कुरा व्यवस्थित अवस्थाबाट अव्यवस्थित अवस्थामा जाने क्रममा छ। सबै कुरा बिग्रँदै छ, उँधो लाग्दैछ। थर्मोडाइनामिक्सको दोस्रो नियम (Second Law of Thermodynamics) ले ठीक यही कुरालाई बयान गर्दछ जसरी अख्रीष्टिय क्रम-विकासवादीहरूले समेत स्वीकार गर्दछन्। आइजाक असिमोभ (Isaac Asimov) एक क्रम-विकासवादी थिए तर उनले दिएको थर्मोडाइनामिक्सको दोस्रो नियमले क्रम-विकासवादलाई वास्तवमै रद्द गर्दछ र बाइबललाई पुष्टि गर्दछ: “विश्व-ब्रम्हाण्ड निरन्तर झन् झन् अस्तव्यस्त बन्दैछ! यसरी हेरिँदा हामीले दोस्रो नियमलाई हाम्रो वरिपरि जताततै देख्न सक्छौं। कति कठिन छ घरलाई, कलपूर्जाहरूलाई र हाम्रै शरीरहरूलाई सम्हालिराख्‍न र सिद्ध, चालु अवस्थामा राखिराख्न; तिनीहरूलाई बिग्रन दिन कति सजिलो छ। वास्तवमा, तिनलाई बिग्रन दिन हामीले केही पनि गर्नुपर्दैन अनि सबै कुराहरू बिग्रँदै जान्छन्, ढल्छन्, टुटफुट हुन्छन्, खिइन्छन्, ती सब आफसेआफ हुन्छन्। दोस्रो नियम भनेको यही नै हो” (Asimov, “In the Game of Energy and Thermodynamics You Can’t Break Even,” Smithsonian Institute Journal, June 1970, p.10)। यो वास्तविक हो र यो कुरा क्रम-विकासवादको परिकल्पनाभन्दा कति फरक छ जसले भन्छ कि जीवहरू निर्जीवबाट विस्तारै जीवमा क्रम-विकास भए, अस्तव्यस्तताबाट शुरु भएर आफसेआफ व्यवस्थित भए।
सबै कुराहरू तिनीहरूले परमेश्वरका उद्देश्यहरू पूरा गर्नुपर्छ भनेर सृष्टि गरिएका हुन् भन्ने कुरा उत्पत्तिले बताउँछ। प्रकृतिमा जहाँसुकै हेरौं, सुक्ष्मदर्शक यन्त्रद्वारा देखिनेदेखि दूरबीन टेलिस्कोपद्वारा देखिनेसम्मका कुराहरू, त्यहाँ हामी रचना (design) देख्दछौं, जुन कुराचाहिँ क्रम-विकासको परिकल्पनाको विपरित छ जसअनुसार संसार अन्धाधुन्ध हुने भौतिक प्रकृयाहरूको उपज हो। अध्ययन गर्नुहोस् कोषलाई, आँखालाई, कानलाई, पातलाई, उड्ने पखेटालाई, अणुलाई, प्रकाशलाई, ध्वनिलाई, पानीलाई — जहाँतहिँ तपाईले उद्देश्य (purpose) र रचना (design) भेट्टाउनुहुन्छ। माइकल डेन्टन (Michael Denton) को अवलोकन यस प्रकार छ, “सिद्धताको यो भयङ्कर सर्वव्यापकता हो अर्थात् हामीले जहाँ हेरे पनि, जति गहिरो तहमा हेरे पनि हामीले त्यसमा पूर्णरूपमा अतुलनीय श्रेष्ठतायुक्त सुन्दरता र बुद्धि देख्छौं र यही तथ्यले आकस्मिकको अवधारणा (idea of chance) लाई यति ठूलो चुनौती दिन्छ” (Evolution: A Theory in Crisis, 1983, p. 342)। सिर्फ एउटा “सरल” सुक्ष्मदर्शकीय एक-कोषीय ब्याक्टेरिया (आर. कोलाइ) भित्र डीएनए सूचना एकाईहरू हुन्छन् जो इन्साइक्लोपिडिया ब्रिटानिका (Encyclopedia Britannica) का १० करोड पन्नाहरूका बराबर हुन्छन्, अनि ती सब सूचनाहरू सिद्ध रूपमा आपसमा मिलेर काम गर्दछन् र आफ्‍नै प्रतिलिपिहरू उतार्दछन्! उद्देश्य र रचना नै हामीले आशा गर्न सकिने कुरा हुन् यदि संसारलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो भने जसरी उत्पत्तिको अभिलेखले दाबी गर्दछ, तर यदि क्रम-विकासवाद सत्य हो भने हामीले यहाँ केवल अस्तव्यस्तता र गोलमाल मात्र भेट्टाउनुपर्नेथ्यो।
बुद्धिपूर्ण सभ्यता निर्माण गर्ने क्षमता मानिससित शुरुदेखि नै थियो भन्ने कुरा उत्पत्तिले बताउँछ। आदमका सन्तानले पशुपालन गरे, साङ्गीतिक बाजा बनाए, पित्तल र फलामका काम गरे (उत्पत्ति ४:२०-२२)। तर क्रम-विकासवादको दाबी अनुसार मानिसको सभ्यता “ढुङ्गे युग” (“stone age”) बाट शुरु भयो जुन बेला “गुफामा बस्ने मानिसहरू” (“cave men”) पशुजस्तै जीवन बिताउँथे।
क्रम-विकासवादको “ढुङ्गे युग” को शिक्षालाई बाइबलले कसरी काट्छ?
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 12:06:562020-11-27 12:10:04क्रम-विकासवाद
यूहन्ना १४:१२ लाई के गर्ने नि? यसको अर्थ शताब्दियौंसम्म विश्वासीहरूले येशूका भन्दा महान् चिन्हरूपी आश्चर्यकर्महरू गर्न सक्नेछन् भन्ने हुन सक्दैन। त्यो असम्भव कुरा हुनेथ्यो। हजारौंलाई खुवाउनु, पानीमाथि हिँड्नु र मरेकालाई बिउँताउनु भन्दा ठूला आश्चर्यकर्महरू के हुन सक्थ्यो र? चेलाहरूले उहाँले भन्दा ठूलो आश्चर्यकर्महरू गर्नेछन् भनेर येशूले भन्नुभएको होइन; उनीहरूले उहाँले भन्दा ठूला कामहरू गर्नेछन् चाहिँ उहाँले भन्नुभएको हो। “कामहरू” भन्ने शब्द कुनै ठाउँहरूमा येशूका आश्चर्यकर्महरूको बयान गर्न प्रयोग भएका छन्, तर त्यसैमा सीमित भने छैन। येशू केवल प्यालेस्टाइनभित्र मात्र सेवकाइ गर्नुभयो र उहाँको प्रत्यक्ष सेवकाइअन्तर्गत तुलनात्मक रूपमा थोरै आत्माहरू मात्र बचाइएको देख्‍नुभयो, तर उहाँका चेलाहरू सारा संसारभरि सेवकाइ गरेका छन् र तिनीहरूले अनगिन्ती आत्माहरू बचाइएका देखेका छन्। येशूले कुनै पुस्तक लेख्‍नुभएन, तर उहाँका प्रेरितहरूले पवित्र शास्त्रको बाँकी रहेको भागलाई पूरा गरे। अभक्तिको पुस्ताको बाबजुद पनि परमेश्वरका जनहरूले पवित्र जीवनहरू यापन गर्न, सबभन्दा अग्निमय उत्‍पीडनहरूको सामना गर्न र संसारको पल्लो छेउसम्म सुसमाचार प्रचार गर्न सामर्थ्य प्राप्‍त गरेका छन्। परमेश्वरका जनहरूले निरन्तररूपमा नै आश्चर्यकर्महरू अनुभव गर्दैआएका छन् र महान् कार्यहरू गरेका छन् तर तिनीहरूले मसीहका चिन्हरूपी आश्चर्यकर्महरू भने गरेका छैनन्।
तिमोथीको उदाहरण (१ तिमोथी ५:२३)। तिमोथी बारम्बार विरामी पर्थे र प्रेरित पावलले उनलाई तिनको पेटको खातिर र तिनका बारम्बार हुने दुर्बलताको खातिर अलिकति दाखमद्य प्रयोग गर्नलाई निर्देशन दिन्छन्। परमेश्वरले तिमोथीलाई उनको रोगबाट अलौकिक चङ्गाइ गर्नुभएन नता उहाँले तिमोथीलाई उसको रोगलाई सराप्‍न नै निर्देशन दिनुभयो नता ती रोगहरूमाथि “विश्वासको वचन” उच्चारण गर्न नै भन्नुभयो।
पावलको उदाहरण (२ कोरिन्थी १२:७-१०)। तीन-तीन पटक पावलले परमेश्वरसित यस समस्यालाई हटाइन विन्ती गरे, तर बाइबलले भन्दछ, परमेश्वरले सो गर्न इन्कार गर्नुभयो। उक्त दुर्बलाता उसकै आत्मिक उन्नतिका लागि उसले बोकिरहनुपर्छ भनेर परमेश्वरले पावललाई भन्नुभयो। यो जानेपछि पावलले आफूलाई परमेश्वरको इच्छामा सुम्पे र बुद्धिमानीपूर्वक भने, “यसकारण ख्रीष्टका निम्ति म दुर्बलताहरूमा, निन्दाहरूमा, अभावहरूमा, सतावटहरूमा, क्लेशहरूमा आनन्दित हुन्छु; किनकि जब म कमजोर छु, तब म बलियो हुन्छु” (२ कोरिन्थी १२:१०)। आज ख्रीष्टियानहरूको लागि यो एउटा सिद्ध उदाहरण हो। हामीले चङ्गाइको लागि र परीक्षा र कठिनाइहरूबाट छुटकारा पाउनको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ तर जब परमेश्वरले चङ्गाइ गर्नुहुन्न त्यस बेला हामी परमेश्वरको इच्छाप्रति झुक्नुपर्छ र त्यो रोग वा परीक्षालाई ईश्वरीय हातबाटको कुराको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। यो विश्वासको अभाव होइन; यो त सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सार्वभौमिकताप्रतिको अधीनता हो। कोही-कोही पेन्टेकोस्टलवादीहरूले पावलको दुर्बलता कुनै रोग थिएन भनेर तर्क गर्न खोजेका छन् तर २ कोरिन्थी १२:९ मा “दुर्बलता” भनेर अनुवाद गरिएको ग्रीक शब्द (आस्थनेया) लाई अन्य ठाउँहरूमा “रोग” (यूहन्ना ११:४) “बिरामी” (प्रेरित २८:९) भनेर अनेर अनुवाद गरिएको छ।
आज परमेश्वरले याकूब ५:१३-१५ को नमुनाअनुसार चङ्गाइ गर्ने गर्नुहुन्छ। यस खण्डमा एउटा सार्वजनिक चङ्गाइ सभाको नभई व्यक्तिगत चङ्गाइको प्रसङ्ग प्रस्तुत गरिएको छ अनि यसमा “चङ्गाइको वरदान” भएको व्यक्तिको कुनै कुरा छैन। यसमा केवल मण्डलीका एल्डरहरूको उल्लेख छ जोहरूले विरामी व्यक्तिलाई तेलले अभिषेक गर्दछन् र उसमाथि प्रार्थना गर्दछन्।
४) मण्डली युगको अन्ततिर झूटा चिन्ह र चमत्कारहरू हुनेछन् भनेर बाइबलले चेताउनी दिएको छ (मत्ती २४:२४)। यस युगको आखिरी चरणको एउटा चरित्र भनेको झूटा भविष्यवक्ताहरूद्वारा गरिने “ठूला-ठूला चिन्ह र चमत्कारहरू” हुन् भनेर येशूले चेताउनी दिनुभयो। यसकारण यो स्पष्ट बुझिने कुरा हो कि कसैले आश्चर्यकर्महरू गर्दैछ भन्दैमा ती आश्चर्यकर्महरू परमेश्वरबाटकै हुन् भन्ने होइन। ती त शैतानबाटका हुन सक्छन्! भिन्नता जान्न सक्ने एउटै मात्र छ, त्यो हो तिनीहरूको शिक्षालाई बाइबलद्वारा जाँच्नु। हामीले “सबै कुराहरू जाँच्नुपर्छ” (१ थेस्सलोनिकी ५:२१)। हामी ती बेरियालीहरू जस्तै हुनुपर्छ जोहरूले “यी कुराहरू यस्तै हुन् कि होइनन् भनी दिनहुँ पवित्रशास्त्रहरूमा खोजी गर्दथे” (प्रेरित १७:११)। यही एउटै मात्र उपायद्वारा हामीले आफैलाई शैतानका धूर्त युक्तिहरूबाट जोगाउन सक्छौं।
कुनचाहिँ पदमा पावलले “प्रेरितका लक्षणहरू” भन्ने कुराको उल्लेख गरे?
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 12:03:382020-11-27 12:08:30आश्चर्यकर्महरू
१) बाइबलीय उपवास देखाउनलाई गरिने कुरा होइन (मत्ती ६:१६-१८)। कपटपूर्ण धर्मलाई परमेश्वर घृणा गर्नुहुन्छ जुन कुरा भनेको परमेश्वरको सामु साँचो पवित्रता रहित भएर पनि मानिसका सामु पवित्र देखा पर्ने मानिसको प्रयास हो। यस खण्डमा मानिसहरूका सामु आत्मिक देखा पर्न खोज्नलाई गरिने खालको उपवासलाई ख्रीष्टले हप्काउँदै हुनुहुन्छ। सही ढङ्गले गरिने खालको उपवासको अभ्यासकै उहाँले उपहास गर्नुभएको चाहिँ होइन। वास्तवमा, आफ्‍ना चेलाहरू उपवास बस्छन् भन्ने कुरालाई उहाँले त्यत्तिकै मानिलिनुभएको देखिन्छ। उहाँले “यदि तिमीहरू उपवास बस्दछौ” भन्नुभएन, बरु “जब तिमीहरू उपवास बस्दछौ” भन्नुभयो। अनि उहाँले बाइबलीय उपवास बस्नेहरूले परमेश्वर पिताबाट खुल्लमखुल्ला इनाम पाउनेछन् भन्ने सुन्दर र निश्चित प्रतिज्ञा दिनुभयो।
४) बाइबलीय उपवास एउटा रित्तो सन्न्यासी अभ्यास होइन (कलस्सी २:२०-२३)। उपवासले पवित्र बनिन्छ भनेर विश्वास गर्ने कतिपय झूटा शिक्षकहरूले पावलको समयमा उपवासको अभ्यास गर्दैथिए। एउटा नियमावली (“नछोओ, नचाख, हातमा नलेओ”) लाई पालन गरेर मुक्ति र पवित्रता प्राप्‍त गरिन्छ भनेर उनीहरूले सिकाउँथे। रोमन क्याथोलिक सन्न्यास प्रणाली (Roman Catholic monasticism) ले यस भ्रमलाई अँगालेको हो। ती क्याथोलिक सन्न्यासीहरू स्वर्गमा पुग्ने “सिँढी चढ्ने” र परमेश्वरको नजिक पुग्ने लक्ष्यमा समाजबाट बिलकुलै पृथक बसे र आफैलाई पिट्ने, भोकभोकै बस्ने, ननुहाउने र लुगै नफेर्ने जस्ता अरू थुप्रै कुराहरू गरे। तर यो एक झूटा सुसमाचार हो। मुक्ति परमेश्वरको अनुग्रहले पाइने दामबिनाको वरदान हो र पवित्रता र आत्मिक विजय सन्न्यासी अभ्यासबाट नभएर विश्वासीभित्र अन्तरवास गर्नुहुने पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा सरल नयाँ नियम विश्वासप्रतिको आज्ञापलानद्वारा हो। उपवास ख्रीष्टिय जीवन र सेवकाइको महत्त्वपूर्ण भाग हो, तर आत्मिकता भन्ने कुरा शरीरलाई कष्ट दिएर र विभिन्न रीति तथा खानपीन सम्बन्धी नियमहरू पालन गरेर हासिल गरिन्छ भनेर सोच्नदेखि हामी होशियार बस्नुपर्छ। साँचो आत्मिकता भनेको येशू ख्रीष्टसितको ठीक सम्बन्ध र सङ्गति हो।
न्यायकर्ता २०:२६–युद्धमा विजय हुन इस्राएलीहरू उपवास बसे
१ शमूएल १:६-७–एउटा छोरा पाउन हन्ना उपवास बसिन्
१ शमूएल ७:६–पश्चात्ताप गर्दा इस्राएलीहरू उपवास बसे
१ शमूएल ३१:१३–याबेश-गिलादका मानिसहरू शाऊलको निम्ति शोक मनाउँदा उपवास बसे
२ शमूएल १:१२–दाऊद र उनका मानिसहरू शाऊल, योनातान र मारिएका इस्राएलीहरूका निम्ति शोक मनाउँदा उपवास बसे
२ शमूएल १२–दाऊद आफ्‍नो बच्चाको निम्ति कृपा माग्दै उपवास बसे
१ राजा २१:२७–आहाब कृपा पाउन उपवास बसे
२ कोरिन्थी २०:३–यहोशापात र इस्राएल सहायता र सुरक्षा पाउन उपवास बसे
एज्रा ८:२१-२३–एज्रा र यहूदीहरू सहायता र सुरक्षा पाउन उपवास बसे
नहेम्याह १:४–नहेम्याह शोक मनाउँदा र सहायता चाहँदा उपवास बसे
नहेम्याह ९:१-२–इस्राएलीहरू शोक मनाउँदा र पश्चात्ताप गर्दा उपवास बसे
एस्तर ४:१६–एस्तर र उनका साथीहरू विजय पाउन उपवास बसे
एस्तर ९:३–विजयको पछाडि उपवासले भूमिका खेलेको थियो भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ भजनसङ्ग्रह ३५:१३-१४–प्रार्थना र शोकसहित उपवास
भजनसङ्ग्रह ६९:१०-११–प्रार्थना र शोकसहित उपवास
यशैया ५८:६-८–परमेश्वरलाई खुशी पार्ने उपवास
यर्मिया ३६:९–इस्राएलीहरू कृपा पाउन उपवास बसे
योएल १:१४; २:१२,१५–परमेश्वरले उपवास बस्न र पश्चात्ताप गर्न आज्ञा गर्नुभयो
योना ३:५–कृपा पाउन निनवेकाहरू पश्चात्ताप गरे र उपवास बसे
दानियल ९:३–दानियल बुद्धिका निम्ति उपवास बसे
मत्ती ४:२–उजाडस्थानमा परीक्षा गरिँदा येशू उपवास बस्नुभयो
मत्ती ६:१७-१८–पिताले उपवासमाथि आशिष दिनुहुन्छ भनेर येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभयो
मत्ती १७:२१–कतिपय शैतानिक किल्लाहरू भत्काउनलाई उपवास आवश्यक पर्छ
मर्कूस ९:२९–शैतानिक शक्तिहरूलाई जित्नलाई उपवास आवश्यक पर्छ
लूका २:३७–हन्नाले परमेश्वरको सेवा गर्ने क्रममा उपवास त्यसको एक भाग थियो
प्रेरित १३:२–एन्टिओकका सेवकहरूको सेवकाइको क्रममा उपवास त्यसको एक भाग थियो
प्रेरित १३:३–नियुक्ति कार्य उपवाससहित गरिन्थ्यो
प्रेरित १४:२३–नियुक्ति कार्य उपवाससहित गरिन्थ्यो
१ कोरिन्थी ७:५–वैवाहिक सम्बन्धबाट अलग रहनलाई एक मात्र सही कारण उपवास र प्रार्थना हो
२ कोरिन्थी ६:५–आफूलाई येशू ख्रीष्टको सेवकको रूपमा प्रमाणित गर्ने पावलको एउटा तरिका उपवास थियो
२ कोरिन्थी ११:२७–पावल बारम्बार उपवास बस्थे
उपवास सम्बन्धी उपर्युक्त उदाहरण तथा निर्देशनहरूलाई हलका सम्झन मिल्दैन। पवित्र शास्त्रका उदाहरणहरू तिनका आज्ञाहरू जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भनिएको छ — १ कोरिन्थी १०:११; रोमी १५:४। प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो नमुना हुनुहुन्छ (१ पत्रुस १:२१), र उजाडस्थानको परीक्षाको घडीमा उहाँले बस्नुभएको उपवास हाम्रो निम्ति नमुना हो जसरी गेत्सेमनीमा उहाँका परीक्षाका घडीका प्रार्थनाहरू हाम्रा निम्ति नमुना हुन्। साथै पावल प्रेरितको अनुसरण गरिनुपर्छ भनेर हामीलाई बताइएको छ (फिलिप्पी ३:१७; ४:९) र पावलले हाम्रा सामु बारम्बार उपवास बस्ने नमुना छोडेका छन् (२ कोरिन्थी ११:२७)।
प्रभु येशू ख्रीष्टले उपवास सम्बन्धी एउटा निश्चित प्रतिज्ञा दिनुभयो। ठीक तरिकामा ठीक कारणले कसैले उपवास बस्दा–“गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई खुल्लमखुल्ला इनाम दिनुहुनेछ।” यो प्रतिज्ञा बाइबलमा भएका सबभन्दा सुन्दर प्रतिज्ञाहरूमध्ये एक हो र यसलाई सजिलै बिदा गर्न सकिन्न। यदि उपवास महत्त्वपूर्ण कुरा नभएको भए परमेश्वरले यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुहुने थिएन। ख्रीष्टले सही किसिमको उपवास बस्ने कामलाई कहिल्यै निरुत्साहित पार्नुभएन। गलत अभ्यासको उहाँले दोष देखाउनुभयो र त्यसलाई सच्च्याउनुभयो तर आत्मिक उपवासलाई उहाँले कहिल्यै निरुत्साहित पार्नुभएन। भन्नुपर्दा, उहाँले आफ्‍ना चेलाहरूले उपवास बस्छन् भन्ने कुरालाई त्यत्तिकै मानिलिनुभएको छ।
परमेश्वरले मानिसका हृदयहरू देख्नुहुन्छ तर बाइबलले भन्दछ उहाँ हृदयको चाहनाको खुल्ला प्रमाणको माग गर्नुहुन्छ — योएल २:१२, “”
यो कुरा अब्राहामले इसाहकलाई बलि चढाएको कुरामा देखिन्छ। अब्राहामले आज्ञा पालन गर्नेछ र आफ्‍नो प्रिय छोरालाई चढाउनेछ भनेर परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो, तर अब्राहामले वास्तवमै उक्त कार्य गरेर देखाएको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। इसाहकलाई बलि चढाउन भनी अब्राहामले छुरी उठाइसकेपछि मात्र परमेश्वरले भन्नुभयो, “त्यस केटामाथि आफ्‍नो हात नबढाऊ, र त्यसलाई केही नगर; किनकि अब म जान्दछु – तिमी परमेश्वरको डर मान्दा रहेछौ, किनभने तिम्रो छोरालाई, तिम्रो एकमात्र छोरालाई पनि तिमीले मबाट रोकेर राखेका छैनौ” (उत्पत्ति २२:१२)।
उपवास, पवित्र आत्माको अगुवाइमा गरिने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो। त्यो एक वा एकभन्दा बढी छाकको उपवास हुन सक्छ जुन चाहिँ उक्त घडीको खाँचो र परमेश्वरको अगुवाइबमोजिम गर्न सकिन्छ। रोमी १४ ले यस किसिमको कुराको गरिरहेको छ जहाँ भनिएको छ, “कसैले एउटा दिन अर्को दिनभन्दा ठूलो मान्दछ; अर्कोले सबै दिन एकनास ठान्दछ। हरेक आफ्‍नै मनमा पूरा निश्चित होस्” (रोमी १४:५)।
उपवास बस्नलाई बाइबलले कडा वा अलचिलो नियमहरू तोकेको छैन। दानियलको २१ दिनको उपवासमा हामीलाई बताइएको छ, “पूरा तीन हप्ता पूरा नहोउन्जेल मैले न स्वादिष्ट भोजन खाएँ, न मासु; अनि दाखमद्य मेरो मुखमा पसेन, अनि मैले आफूमाथि तेल लगाउँदै लगाइनँ” (दानियल १०:३)। यसको मतलब दानियलले केही न केही त खाएको बुझिन्छ, तर स्वादिष्ट भोजन खानदेखि भने उनी अलग रहे।
परमेश्वरले उपवास सम्बन्धी निश्चित निर्देशनहरू नतोक्नुभएको हुनाले, यसको अभ्यास एक व्यक्ति र प्रभुको बीचको व्यक्तिगत मामिला हुनुपर्छ। जस्तै, बच्चाको आमाले पटक्कै खान छोड्नु बुद्धिमानी हुँदैन किनकि तिनी मात्र नभई तिनको शिशु पनि उक्त खानेकुरामा निर्भर रहेको हुन्छ। मधुमेह जस्ता स्वास्थ्य समस्या भएकाहरू उपवास सम्बन्धी होशियार हुनुपर्छ। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, “म तिमीलाई शिक्षा दिनेछु; अनि तिमीले कुन मार्गमा चल्नुपर्ने हो, सो तिमीलाई सिकाउनेछु; म मेरो आँखाले तिमीलाई अगुवाइ गर्नेछु” (भजनसङ्ग्रह ३२:८)। यो प्रतिज्ञाले उपवासलाई पनि समेट्छ। परमेश्वरले नै मलाई कहिले उपवास बस्ने, कति लामो बस्ने र कुन-कुन कुरादेखि अलग बस्ने भनेर सिकाउनुहुनेछ।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 11:59:462020-11-27 12:06:28उपवास के हो?